‘हुन्डाई भेन्यू’ गाडी नेपाल भित्रियो, कस्ता छन सुविधा ? - corporatekhabar : Nepals first corporate news magazine and portal
‘हुन्डाई भेन्यू’ गाडी नेपाल भित्रियो, कस्ता छन सुविधा ?
काठमाडौं, भदौ ५ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाईको नयाँ ‘हुन्डाई भेन्यू’ गाडी नेपाल ल्याएको छ । नाडा अटो शो लाई लक्षित गरी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले उक्त गाडी भित्र्याएको हो । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाई भेन्यू एक समारोहबीच सार्वजनिक गरेको हो ।
हुन्डाई भेन्यू स्मार्ट इलेक्ट्रिक सन् रुफ, आकर्षक क्रोमयुक्त फ्रन्ट ग्रिल तथा स्पोर्टी रुफ रेल ले सु–सज्जित छ । यसको आर १६ डायमण्ड कट एसोड पाङग्रा तथा हिल एसिस्ट कन्ट्रोलले नौलो र उत्साहजनक सवारी अनुभव दिने भएको छ ।
भेन्यूमा बत्तीहरुको जडान सुन्दर तथा आधुनिक रुपमा गरिएको छ । जसअन्तर्गत कर्नरिङ लाइट, प्रोजेक्टर फग लाइट तथा क्रिष्टल सहितको लेड लाइटलगायतका विशेष छन् ।
प्रकाशित : ५ भाद्र २०७६, बिहीबार
नाडाको भन्सार, भीसीटीएस तथा कर सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम विराटनगरमा
सिद्धार्थ ईन्स्योरेन्स र सिप्रदी ट्रेडिङ्गबीच सम्झौता
रोयल इन्फिल्डको “सर्भिस राइड २०२०” सम्पन्न
टाटा मोटर्सको पर्शा र चनौलीमा नयाँ शोरुम संचालनमा